IKigali iye eDoha iindiza ezingapheliyo ngoku kunye neQatar Airways kunye neRwandAir isivumelwano secodeshare esitsha
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » IKigali iye eDoha iindiza ezingapheliyo ngoku kunye neQatar Airways kunye neRwandAir isivumelwano secodeshare esitsha
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • abantu • Iindaba zaseQatar zokuqhekeka • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Iindaba zaseRwanda eziQhekezayo • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
IKigali entsha yeRwandAir - iDoha engamisiyo ukusuka ngoDisemba iza kubonelela ngamava okuhamba angenamthungo okudibanisa iAfrika nehlabathi.
I-Qatar Airways kunye neRwandAir batyikitye isivumelwano esibanzi sokwenza ikhowudi namhlanje.
Abathengi beenqwelomoya zombini baya kuxhamla kufikelelo olululo kwiindawo ezingaphezu kwama-65 zehlabathi zokudibanisa iikhowudi kwihlabathi liphela.
Umphathi weflegi yaseRwanda uzakwazisa ngeenqwelomoya ezintsha ezingapheliyo phakathi kweKigali hub neDoha ukusukela ngoDisemba.
I-Qatar Airways kunye IRwandAir batyikitye isivumelwano se-codeshare sokubonelela abahambi ngokhetho olongezelelekileyo, inkonzo eyandisiweyo kunye nokunxibelelana okukhulu kwiindawo ezingaphezu kwama-65 kwiAfrika iphela nakwihlabathi liphela. Njengenxalenye yesivumelwano, umphathi weflegi yaseRwanda uzakwazisa ngeenqwelomoya ezintsha ezingapheliyo phakathi kweKigali hub kunye neDoha ukusukela ngoDisemba.
Isivumelwano sinceda abahambi abavela kwihlabathi liphela ababhabha ngeenqwelomoya zombini, ezandisa inethiwekhi yomqhubi ngamnye. Abakhweli banokuyonwabela into elula yokuthenga iinqwelomoya kwiinqwelomoya zombini ezisebenzisa inkqubo yokubhukisha engenamthungo, eyenza kube lula ukwenza amatikiti, ukungena, ukukhwela kunye nokujonga imithwalo kuhambo lonke.
Qatar Airways UMphathi oyiNtloko weQela, oHloniphekileyo uMnu. Akbar Al Baker, uthe IRwandAirInkonzo entsha engapheliyo phakathi kweKigali nekhaya lethu laseDoha. Ngalesi sivumelwano senziwe ngokubanzi, sizibophelele ekunikezeleni ukhetho olukhulu kunye nokunxibelelana kubathengi bethu eAfrika nakwihlabathi liphela. Ubambiswano olutsha luya kunceda ukuma Qatar Airways kwingingqi kwaye zincedise isicwangciso sethu sokwandisa iAfrika. Njengokuba sizilungiselela ukuhlangabezana nemfuno ekhulayo ekuhambeni ekudala silindelwe, ndibona ubuhlakani obunamandla obufana nolu bunceda ukuhambisa uhambo, ukhenketho kunye norhwebo ngokuqinileyo kwindlela yokubuyela kwimeko yesiqhelo. ”
IRwandAir U-Nks Yvonne Makolo, uthe: “Esi sisiganeko esibalulekileyo kwiRwandAir kwaye sibonisa ukuqala kohambo olutsha olunomdla kunye neQatar Airways. Sinebhongo kakhulu ngokwamkela iDoha kuthungelwano lwendlela yethu, ukudibanisa abathengi kunye nehabhu yaseQatar nokwandisa imephu yabo yenqwelomoya.